အမြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု Moto X Play VS Oneplus2| Androidsis
နှိုင်းယှဉ် Moto X Play VS Oneplus2နှင့်မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု
Francisco Ruiz | | Motorola က, OnePlus
Android terminal အသစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကိစ္စတွင်ရင်ဆိုင်နေရသည် Moto X ကို Play VS Oneplus 2, အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူ terminal ကိုနှစ်ခုယူရို 400 ဝန်းကျင်တစ် ဦး အလွန်ဆင်တူစျေးနှုန်းမှာနိုင်ငံတကာစျေးကွက်မှာဆည်းပူးနိုင်။ ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုလုံးကို Androidsis ရှိနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်မြင်လိုလျှင်Moto X Play ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သင်ဤ link ကိုသာနှိပ်ပါကြည့်ဖို့အဖြစ်အတူတူပင် သင်ဤအခြားလင့်ခ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ဝင်ရောက်လိမ့်မည် Oneplus2၏ပြန်လည်သုံးသပ်.
နောက်ဆောင်းပါး၌၊ နှစ် ဦး စလုံးဆိပ်ကမ်း၏နှိုင်းယှဉ်စားပွဲပေါ်မှာ သူတို့ရဲ့စက္ကူပေါ်ကသူတို့ရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုနှိုင်းယှဉ်လျှင်, ငါတို့သည်လည်းယခုဂန္ပူးတွဲ Androidsis မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု Terminal နှစ်ခုစလုံးတွင်တစ်ချိန်တည်းကျွန်ုပ်တို့လည်ပတ်နေသည့်အခါ Android application အချို့သည်စွမ်းဆောင်ရည်နှစ်ခုလုံး၏အစစ်အမှန်အချိန်တွင်မြင်တွေ့နိုင်ပြီးမျက်နှာနှစ်မျိုးနှင့်ခြားနားသောခြားနားမှုများရှိပါကသင်၏ကိုယ်ပိုင်အမြင်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ဤအခါသမယတွင် Androidsis အမြန်နှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသောအသစ်အဆန်းတစ်ခုအနေနှင့် AnTuTu application ၏ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုလုံးတွင်တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်မှုကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။
1 နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ Moto X Play
2 Oneplus2နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
3 နှိုင်းယှဉ်စားပွဲ Moto x Play VS Oneplus 2
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ Moto X Play
ပုံစံ Moto X ကိုကစား XT1562
ဖန်သားပြင် 5'5 "FullHD 1920 x 1080 pixels နှင့် 480 dpi
Processor ကို 615 Ghz နှင့် 1 Bit နည်းပညာရှိ Qualcomm Snapdragon7Octa Core
GPU ကို 405 Mhz မှ Adreno 550
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း ၁၆ နှင့် ၃၂ Gb မော်ဒယ်များသည် MicroSD အထိ 16 Gb အထိထောက်ပံ့သည်
နောက်ကင်မရာ 21'4 mpx 5248 x 3936 pixels အမြင့်ဆုံး resolution - autofocus - dual flash LED (dual tone) - ထိတွေ့မှုအာရုံ - မျက်နှာနှင့်ပြုံးရှာဖွေတွေ့ရှိမှု - HDR - geo-tagging - 1080p @ 30fps video recording နှင့် slow motion mode
ရှေ့ကင်မရာ 4'9 mpx
ဆက်သွယ်မှု 2G - 3G - 4G - ကြိုး - GSM 850/900/1800/1900 - HSDPA 850/900/1700/1900/2100 - LTE (1-2-3-4-5-7-8-12-17-28) - ဝိုင်ဖိုင် - ဘလူးတုသ် ၄.၀ - aGPS ပါသော GPS နှင့် Glonass အထောက်အပံ့ - NFC
အခြားအင်္ဂါရပ်များ အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းခြင်းနှင့် Dual SIM မော်ဒယ်များ
ဘက်ထရီ 3600 mAh ဘက်ထရီ
အစီအမံ 148 x 75 x 8.9 ~ 10.9 မီလီမီတာ
စြေး ၁၆ ဂစ်မော်ဒယ်အတွက် ၃၉၉ ယူရို
Oneplus2နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
ပုံစံ Oneplus2A2001
operating system Android 5.1.1 Oxygen OS 64 ပါသော 2.0.1-bit Lollipop
ဖန်သားပြင် Gorilla Glass ကာကွယ်မှုဖြင့် 5'5 "IPS Neo FullHD 1920 x 1080 p နှင့် 480 dpi
Processor ကို 810-bit နည်းပညာဖြင့် 2.1 Ghz တွင် Qualcomm Snapdragon 1 v7 Octa core ဖြစ်သည်
ရမ် 4Gb LDDR3
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 16Gb နှင့် 64 Gb နှစ်ခုရှိသောမော်ဒယ်လ် ၂ ခုမှာဤတွင်ဆန်းစစ်။ MicroSD ကဒ်မပါရှိဘဲအကြံပြုခဲ့သည်
နောက်ကင်မရာ Flash mdx focal aperture 13 laser focus နှင့် 2.0K video recording နှင့်အတူ4mpx
ဆက်သွယ်မှု 2G / 3G / 4G - DualSIM (nanoSIM) - ဘလူးတုသ် - ဝိုင်ဖိုင် - GPS နှင့် aGPS
အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များ Home ခလုတ်ရှိလက်ဗွေဖတ်စက် - သတိပေးချက်များကိုထိန်းချုပ်ရန်အထူးသီးသန့်ခလုတ် - ထိတွေ့မှုနေရာကိုပြန်လည်နေရာချထားခြင်းအပြင်နှစ်ကြိမ်ထိတို့ထိခြင်း (သို့) နှစ်ရှည်လများကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာချိန်ညှိနိုင်ခြင်း - နိုးရန်နှစ်ချက်ထိကိုသက်ဝင်စေနိုင်သော Gesture ရွေးစရာ။ ကျနော်တို့မှောင်မိုက်ဆောင်ပုဒ်နှင့်မီးမောင်းထိုးပြအရောင်များကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဘက်ထရီ မဖြုတ်နိုင်သည့် 3300 mAh
အစီအမံ 151'8 x 74'9 x 9'85 မီလီမီတာ
အလေးချိန် 175 ဂရမ်
စြေး 354'17 ယူရို 16 Gb မော်ဒယ်နှင့် Internal Storage 395 Gb နှင့် 94'64 Model တရားဝင်စျေးနှုန်းအောက်နှင့်ဖိတ်ကြားချက်ကိုမလိုဘဲကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်။
နှိုင်းယှဉ်စားပွဲ Moto x Play VS Oneplus 2
Moto X ကို Play စ
5 ကြယ်ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် 4.5 ကြယ်ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
ပိုမိုမြင့်မားသောယှဉ်ပြိုင်မှုနှုန်းဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးထိပ်တန်း Android terminal ကို။
Moto X ကြီးမားသော Motorola terminal ကိုကောင်းမွန်သောဘက်ထရီနှင့် ၂၁ mpx နောက်ကင်မရာပါ ၀ င်သည်။
ဤကြီးစွာသောဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်မှာရှင်းလင်းပြတ်သားသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၀ ယ်ရန်အကြံပေးလိုသည် Oneplus2high-end သတ်မှတ်ချက်များ၊ ကောင်းမွန်သောကင်မရာ၊ ကောင်းမွန်သောပရိုဆက်ဆာနှင့်4Gb RAM၊ ဘက်ထရီကောင်းသည့် terminal ကိုအသုံးပြုလိုသူမည်သူမဆိုအတွက် အထူးသဖြင့် Motorola ကဲ့သို့ဈေးနှုန်းတူစွာသိုလှောင်မှုပမာဏသည် 64 Gb ရှိပြီးသိုလှောင်မှုပမာဏမှာ 16 Gb သာရှိသည်.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါသည်လည်းဝယ်ယူရန်အကြံပြုလိမ့်မယ် Moto X ကို Play စ သုံးစွဲသူများအားလုံးအနေဖြင့်၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်လိုသည်မှာအရာအားလုံးထက်သာလွန်သည် ထူးခြားသောကင်မရာဖြင့် Android terminal နှင့်ဝေးစျေးနှုန်းထက်ကျော်လွန်ကြောင်းဆိပ်ကမ်းထိုက်တန်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Motorola က » နှိုင်းယှဉ် Moto X Play VS Oneplus2နှင့်မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု
မတူညီသောနောက်ခံပုံများမည်သို့မည်ပုံ desktop စာမျက်နှာများပေါ်တွင်မည်သို့မည်ပုံ